वरिष्ठ पत्रकार पिटरको घोषणा: म पनि जेल जान तयार छु – ABC KHABAR
वरिष्ठ पत्रकार पिटरको घोषणा: म पनि जेल जान तयार छु
January 9, 2018 ABC Desk राजनीति, समाचार
काठमाडौं , पुस २५, आज डा. गोडबली लेख्छ -“वरिष्ठ पत्रकार तथा वाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पीटरले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारको सिन्डिकेट चलेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रा. डा. गाेबिन्द केसीले बोल्ने हिम्मत गरेको बताए । पत्रकार पीटरले डा.केसीको सर्वोच्च अादालतमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी अान्दोलनमा एक्येवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
प्रहरीले डा.केसीलाई गिरफ्तार गरेलगत्तै पीटरले सामाजिक संजालामा सर्वोच्च अदालतकै सिन्डिकेटका कारण धेरै मानिसहरुको सार्वजनिक जीवन ध्वस्त भएको बताएका छन् । पीटरले लेखेका छन्, ”उहाँले भनेकाे अदालत भ्रस्ट छ, अझ म भन्छु भ्रष्टाचारको सिन्डकेट नै चलेकाे छ । त्यही सिन्डिकेटबाट धेरैकाे सार्वजनिक जीवन ध्वस्त गरिएकाे छ र ठेक्कापट्टामा न्यायको स्वीकृत हुन्छ भने अाम जनमानसको धारणाा छ । डा. केसीले अदालतप्रति उठाएका बिषय गम्भीर छन् ।”
पीटरले भरखरै भारतमा कल्लकत्ता हाइकोर्डका चीफ जस्टिस सी एस कर्णन गिरफतार परेर ६ महिनापछि रिहा भएको बताउँदै नेपालमा पनि त्यो गर्न संकेत गरे । उनले केसीलाई गिरफ्तार गर्ने फैसला प्रधानन्‍यायाधीश गोपाल पराजुलीको निजी निर्णाय भन्दै त्यसको विरोध गर्न जरुरी भएको बताए । विरोध गरेको भरमा जेल जानु पर्ने हो भने तयार हुनु पर्ने बताउँदै पत्रकार पीटरले अाफू त्यसको लागि तयार भएको घोषणा समेत गरेका छन् ।”
सुनिता गिरीको ‘माइतजाने बाटो’
खोटाङमा पहिलो पटक प्यारा ग्लाईडिङ